ဒီတစ်ခါတော့ ဘိုလို ပြောဖို့ လေ့ကျင့်ကြမယ်ဗျာ။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ် လာလုပ်ကြမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ဘိုလိုပြောတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာတော့ ပြောစရာ မလိုပါဘူးနော။ ဘိုလို ပြောတတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း မောင်လူအေးတို့က မိရိုးဖလာ ဘိုလို ပြောလာတာ မဟုတ်လေတော့ ဘိုတွေ ပြောတဲ့ လေသံကို မိအောင် ပြောတတ်ဖို့ လိုလာပြန်တယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ အချိန်ယူပြီး လေ့ကျင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ အားတဲ့ အချိန်လေးတွေ လေ့ကျင့်နိုင်စေဖို့ မောင်လူအေး စာမျက်နှာလေးမှာ စာအုပ်လေးနဲ့ သူ့ရဲ့ သင်ခန်းစာ MP3 လေးတွေ တွဲပြီး တင်ပေးထားခြင်းပါဗျာ။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူ ရမယ်လို့ မျှော်မှန်းပါတယ်ဗျာ။
Lesson - 01Lesson - 02Lesson - 03Lesson - 04Lesson - 05
Lesson - 06Lesson - 07Lesson - 08Lesson - 09Lesson - 10
Lesson - 11Lesson - 12Lesson - 13Lesson - 14Lesson - 15
Lesson - 16Lesson - 17Lesson - 18Lesson - 19Lesson - 20
Lesson - 21Lesson - 22Lesson - 23Lesson - 24Lesson - 25
ီUpdate : Download လုပ်ချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Download လုပ်ချင်တဲ့ Lesson Title ကို Control Key နဲ့ တွဲပြီး Click ခေါက်ပါ။
download လုပ်လို့မရလို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါ။
Download လုပ်လို့ ရအောင် Player Format ပြောင်းထားပေးပါတယ်။ Lesson 1 ခုချင်းစီရဲ့ Title လေးတွေ အလိုက် Control Key နဲ့ Right Click နဲ့ တွဲနှိပ်ပြီး Download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဗျာ။ ...
Thank you so much for your help and great books.
အကိုရေ .. Error ပြနေတရ် :(
my homepage - www.linkiamo.com
Stop by my weblog; http://Www.autismoutofthebox.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=198647&Itemid=0
Takealook at my website: http://www.gnomerz.com/blog/35878/past-simple-and-past-continuous
Stop by my webpage :: clickbank-tribune.com